Fibre optic Ikhebula Abakhiqizi & Abahlinzeki - China Fibre optic Ikhebula Factory
Intambo ye-fiber optic, ebizwa nangokuthi ikhebula le-fiber fiber ngumhlangano osetshenziselwa ukudlulisa imininingwane ngama-pulses of light. Intambo ye-fiber optic yakhiwe kusuka kolunye noma ngaphezulu imicu ye-fiber optic, iqiniswe futhi yavikelwa ngezinto ezikhethekile ukuze zibe nezakhiwo ezinhle zomzimba ngesikhathi sokwakhiwa kolayini bezingcingo.
I-fiber Optical ubuchwepheshe obuvumela ukukhanya ukuthi kuhambe ngamashubhu engilazi amancane. Amashubhu engilazi anobubanzi obukhethekile, imvamisa i-9/125 yokuxhuma kwemodi eyodwa. Imicu ekhiqizwa ubuchwepheshe obuhlukile iqinisekisa ukuthi igoba i-radius ye-tube yamazinga G652D, G657 A1, G657 A2. Izintambo ze-fiber zifakwa inki ngemibala ehlukile, ezenza ukuxhumana kube lula ngesikhathi se-cable cores splicing.
IJera inezinhlobo ezahlukahlukene zezintambo ezincike endaweni yesicelo, njenge:
1) umugqa Main fibre optic ikhebula
2) FTTH uphonsa ikhebula le-fiber optic
3) Ukusatshalaliswa kwangaphakathi kwentambo ye-fiber optic
4) Imbobo ye-fiber optic cable
Izinhlobo ezahlukene zekhebula zinezinto ezahlukahlukene futhi zisetshenziselwa izinhlelo ezahlukahlukene. Ezinye izinhlelo zicela ubufakazi bamanzi, amandla aphezulu e-mechanical, ukumelana ne-UV futhi siqinisa okuthile (i-Steel wire, i-RFP, i-aramid yarn, i-jelly, i-PVC tube njll) kukhebula ukwenza ngcono ukusebenza kwayo.
UJera uhlanganise ngempumelelo isixazululo sekhebula le-fiber optic le-GPON, FTTx, nokwakhiwa kwenethiwekhi ye-FTTH. Ikhebula lethu le-optic liyakwazi ukufakwa kuluphu ophakathi nendawo noma emizileni yokugcina imayela yezakhiwo zezimboni, ujantshi nokuthuthwa kwemigwaqo, izakhiwo zezimboni, izikhungo zosuku kanye ne-ect.
Ikhebula lethu liqinisekiswe elabhorethri yefektri noma ilabhorethri yomuntu wesithathu, ukuhlolwa noma ukuhlolwa kufaka phakathi ukulahleka kokufakwa kanye nokuhlolwa kokulahleka kokubuyela emuva, ukuhlolwa kwamandla okuqina, izinga lokushisa kanye ne-Humidity Cycling Test, ukuhlolwa kokuguga kwe-UV nokunye okuya ngamazinga we-IEC-60794, RoHS kanye ne-CE.
I-Jera inikeza zonke izinto ezihambisanayo zokusabalalisa inethiwekhi ezinjengalezi: i-fiber optic cable clamp, izintambo ze-fiber optic pacth, ukuvalwa kwe-fiber optic splice, ibhokisi lokuqedwa kwe-fiber optic njll.
Sicela uzizwe ukhululekile ukuxhumana nathi ukuthola imininingwane yesikhathi esizayo!
Intambo ye-Fibre optic ene-Frp Rods, i-4 Fibers
Intambo ye-Ftth fiber optic ene-Frp Rods, i-2 Fibers
I-Drop Cable enezintambo ze-Frp, 1 Fibre
Ikhebula Le-Flat Drop Ngezinsimbi Zensimbi, 4 Imicu
Ikhebula le-Fiber Optic Drop nge-Steel Rods, ama-2 Fibers
I-Drop Cable ngezinduku zensimbi, i-1 Fibre
Ftth fibre optic ikhebula nge zu wire kanye zu ro ...
I-Ftth Drop Cable ene-Frp Wire ne-FRP Rods, 1 F ...
I-Ftth Drop Cable Steel Wire Nezinduku ziqinisiwe, ...
Intambo ye-Ftth fiber optic, insimbi yensimbi nezinduku zokwenza ...
Ftth fibre optic ikhebula Steel Wire Futhi Izinduku Rein ...
I-Ftth Cable Steel Wire ne-Frp Rods iqinisiwe, ...